Fantaro ny fampiasana ara-drariny, ny famoahana ary ny IP | Martech Zone
Androany maraina aho dia nahazo fanamarihana avy amina orinasa iray izay efa nanoratanay. Mahery vaika ny mailaka tamin'ny fitakiana ny hanafoananay avy hatrany izay tondroina momba ny anaran'ny orinasa marika eo amin'ny toerantsika ary nanolo-kevitra izahay mba hifandray amin'ny tranonkalany mampiasa fehezan-teny.
Fampiasana ara-drariny ny mari-barotra
Mieritreritra aho fa mety nahomby ny orinasa taloha tamin'ny fanodikodinana olona hanaisotra ny anarana ary hanampy ny andianteny - tetika SEO iray izy ireo mba hametrahana azy ireo ho laharana ary hampihena ny laharanay ho an'ny anaran'ny orinasan'izy ireo. Mampihomehy sy mampangalatra ihany koa, mahatonga ahy hanoratra fanindroany momba ilay orinasa mihitsy.
Notsiahiviko ilay olona avy amin'ilay orinasa fa mampiasa ny anarany aho amin'ny alàlan'ny fampiasana ara-drariny ary tsy mampiasa azy io hivarotana ny entako na koa ampiasainay ho fanamafisana. Saika ny orinasa rehetra dia manana anarana marika famantarana ary tsy misy antony tokony tsy hampiasanao ireo anaran'ny orinasa ireo amin'ny asa soratanao. Ity no Electronic Frontier Foundation Hoy:
Na dia manakana anao tsy hampiasa mari-pamantarana olon-kafa aza ny lalàna mifehy ny fivarotana (tsy azonao atao ny manamboatra sy mivarotra ny famantaranandronao "Rolex" na miantso ny bilaoginao hoe "Newsweek"), tsy manakana anao tsy hampiasa ny mari-pamantarana io raha te hitady. ho an'ny tompona marika na ny vokariny (manolotra serivisy fanamboarana ho an'ny fiambenana Rolex na mitsikera ny fanapahan-kevitry ny editorial Newsweek). Io karazana fampiasana io, fantatra amin'ny anarana hoe "fampiasana ara-drariny nominative," dia avela raha ilaina ny fampiasana ny mari-pamantarana mba hamantarana ireo vokatra, serivisy na orinasa lazainao, ary tsy mampiasa ny marika ianao hanoroana hevitra fa manohana anao ny orinasa . Amin'ny ankapobeny dia midika izany fa azonao atao ny mampiasa ny anaran'ny orinasa amin'ny hevitrao mba hahafantaran'ny olona ny orinasa na vokatra itarainanao. Azonao atao mihitsy aza ny mampiasa ny mari-pamantarana amin'ny anaran'ny sehatra (toy ny walmartsucks.com), raha toa ka mazava fa tsy milaza ianao na miteny ho an'ny orinasa.
Fampiasana ara-drariny ny zon'ny mpamorona
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fampiasana ara-drariny dia miitatra amin'ireo fitaovana manana zon'ny mpamorona ihany koa. Mangataka amin'ireo olona sy orinasa mamerina mamoaka ny atiny manontolo izahay mba hanala ny atiny matetika. Ny famoahana hafa, toy ny Social Media Today, dia mahazo alalana mivantana hamoaka indray ny atiny. Hafa mihitsy ny fampiasana marina. Araka ny Electronic Frontier Foundation:
Ny teny nindramina fohy dia matetika no ampiasaina araka ny tokony ho izy fa tsy fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona dia milaza fa ny “fampiasana ara-drariny… ho an'ny tanjona toy ny fitsikerana, hevitra, fampitam-baovao, fampianarana (ao anatin'izany ny kopia maro hampiasaina any an-dakilasy), ny vatsim-pianarana na ny fikarohana dia tsy fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona.” Ka raha maneho hevitra ianao na mitsikera zavatra iray navoakan'ny olon-kafa, dia zonao ny mampiasa teny manonona. Ny lalàna dia mankasitraka ny fampiasana "manova" - fanehoan-kevitra, na fiderana na fanakianana, dia tsara kokoa noho ny fanaovana kopia mahitsy - fa ny fitsarana kosa dia nilaza fa na ny fametrahana sombin-asa efa misy aza ao anaty tontolon-javatra vaovao (toy ny sary kely ao amin'ny motera fikarohana sary) dia manisa toy ny “manova”. Ny mpanoratra ny bilaogy dia mety nanome anao zon-tsoa bebe kokoa noho ny lisansa Creative Commons, noho izany dia tokony hojerenao ihany koa izany.
Fanamafisana sy famoahana
Nangataka tamiko ihany koa ny orinasa hamoaka politika fampahafantarana mifanaraka amin'ny tranokala iray. Tsy nampaninona ahy izany fangatahana izany. Raha ny Anarana iombonana amin'ny fanompoana ary politika fiarovana fiainan'olona nankatoavina ary naseho tsirairay ny fifandraisanay, ny fananana politikam-pamoahana ofisialy dia toa fanampiny tsara, ka dia nanampy izahay famborahana pejy hametrahana andrasana tsara kokoa amin'ny fomba fanonerana anay momba ny sponsorship, ny doka amin'ny banner ary ny Affiliate.
Nampatsiahiviko ny orinasa fa tsy nankatoavin'ny Federal Trade Commission (Etazonia) noho izany, na dia ilaina aza ny famoahana izany dia tsy voatery ho ilaina na mahasoa ny fananana politika. Manantena ny FTC izahay fa hanazava bebe kokoa ny fomba famoahan'ny olona ny bitsika, ny fanavaozana ny toerana misy azy ary ny lahatsoratra bilaogy amin'ny ho avy. Orinasa iray lohalaharana amin'izany CMP.LY - izay nanangana rindranasa hamoronana, hanarahana ary hanasokajiana ny fampahalalana ho an'ny orinasa lehibe na orinasa voafehy be.
A fifandraisana material dia fifandraisana misy eo amin'ny mpivarotra sy ny influencer izay mety hisy fiatraikany ara-materialy amin'ny lanja na fahatokisana omen'ny mpanjifa ny fanekena navoakan'ny influencer. Perkins Coie
Nampahafantariko ny orinasa fa raha manana olana amin'ny lahatsoratro sy ny fampiasana rohy afisy izy ireo dia afaka mamarana avy hatrany ny fifandraisana izahay. Tsy avelako hisy orinasa hanery ahy hanova ny fomba fanoratako sy hizarako lahatsoratra mba hahitan'izy ireo tombony bebe kokoa. Ity no bilaogiko fa tsy azy ireo. Nihemotra izy ireo ary matoky aho fa tsy hiverina intsony - ary tsy hanoratra momba azy ireo intsony koa aho.
Disclosure: Hamarino indroa miaraka amin'ny mpisolovava anao momba izany ary amporisihiko ianao ho tonga mpanohana ny Electronic Frontier Foundation.
Tags: cmp.lyfanarahan-dalànaCopyrightfampiasana ara-drariny ny zon'ny mpamoronafamborahanaEFFfototra sisintany elektronikafampiasana ara-drarinykomisiona federalyFampahalalana ftcpolitika fiarovana fiainan'olonaAnarana iombonana amin'ny fanompoanafamantaranafampiasana marika
14 Nov 2013 amin'ny 7:43 maraina
Tena manampy, Andriamatoa Karr. Fampahalalana mitsikera ho an'ny bilaogera sy ny hafa.